September 6, 2019 - ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့
(၁၅:၃၀)အချိန် မြစ်ရေအမှတ် ထုတ်ပြန်ချက်
စက်တင်ဘာ ၆ (ပဲခူး) ============================ (၆.၉.၂၀၁၉)ရက်နေ့၊ (၁၅:၃၀)အချိန် တိုင်းထွာချက်များအရ ညောင်လေးပင်မြို့နယ်၊ မဒေါက်မြို့ရှိ စစ်တောင်းမြစ်ရေအမှတ်၊ ရွှေကျင်မြို့ရှိ ရွှေကျင်မြစ်ရေအမှတ်နှင့် ပဲခူးမြို့ရှိ ပဲခူးမြစ်ရေအမှတ်များအား သိရှိနိုင်ပါရန် ထုတ်ပြန်အပ်ပါသည်။ (၆.၉.၂၀၁၉)ရက်နေ့၊ (၁၄:၃၀)အချိန် တိုင်းထွားချက်များအရ ပဲခူးမြစ်ရေသည် စိုးရိမ်ရေအမှတ်သို့ စတင်ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပြီး ထပ်မံ၍လည်း မြစ်ရေမြင့်တက်နိုင်ပါသဖြင့် မြေနိမ့်ပိုင်းနှင့် မြစ်ကမ်းဘေး နေထိုင်သူများ အထူးသတိပြုနေထိုင်ကြရန် လေးစားစွာ အသိပေးအပ်ပါသည်။
ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအတွက် စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်သင်တန်းပေးနိုင်ရေး ဆွီဒင်နိုင်ငံမှ လာရောက်ရှင်းလင်းတင်ပြ
စက်တင်ဘာ ၆ (ပဲခူး) ============================ စက်တင်ဘာလ(၆)ရက်နေ့၊ နံနက်(၁၀)နာရီအချိန်က ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရုံး၊ တော်ဝင်ဟံသာခန်းမ၌ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအတွက် စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်သင်တန်းပေးနိုင်ရေး ဆွီဒင်နိုင်ငံအစိုးရမှ တရားဝင်ဖွဲ့စည်းပေးထားသည့် FBA အဖွဲ့မှ Project Manager, Mr. Par Skold ဦးဆောင်သော ကိုယ်စား လှယ်အဖွဲ့မှ လာရောက်ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့သည်။ ရှေးဦးစွာ Mr. Par Skold က မိမိတို့အဖွဲ့အနေဖြင့် နေပြည်တော်တွင် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် နာယက ဦးတီခွန်မြတ်၊ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံး ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးတင်မြင့်၊ ပြည်ထောင်စု တရားသူကြီးချုပ် ဦးထွန်းထွန်းဦးတို့နှင့် တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးဖြစ်ပါကြောင်း၊ မိမိတို့အဖွဲ့သည် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအတွက် လွှတ်တော်၊ အစိုးရအဖွဲ့တို့ ကြုံတွေ့နေရသည့် အခက်အခဲများကို သိရှိလိုပြီး အကြံဉာဏ်များပေးနိုင်ရန် ဆွီဒင်အစိုးရမှ တရားဝင်ဖွဲ့စည်းပေးထားသည့် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပါကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးတို့ကို ဆွီဒင်နိုင်ငံအနေဖြင့် မဟာဗျူဟာချမှတ်ပြီး (၅)နှစ် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် သဘောတူညီထားချက်အရ …